အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်မှာ မြေ၀ယ်လို့ရပြီ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Contributor, Columnist » အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်မှာ မြေ၀ယ်လို့ရပြီ…	13
ခုလောလောဆယ်… တဧက ၃၅ဒေါ်လာတန်ကို.. ၉ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းနေပါတယ်..။
၀ယ်လို့ရှိရင်.. ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်နေရာရှိရာ မြေတိုင်းမြေပုံ။ ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်၊ NASA ကရိုက်ယူထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံစာအုပ်နဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ရမယ်ဆိုပဲ…။ smile emoticon
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: သဂျီးမနောက်နဲ့ဗျာ
၀ယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားပြီး ဘယ်လိုနေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရမှာလဲ
ပရင့်ထုတ်ပြီး ဖင်ခုထိုင်နေမှရမယ် အကြွေးရလား
kai says: ဒီကမ္ဘာမြေမှာ ခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးပိုက်ဆံဆိုတာကို စပြီးလုပ်တဲ့လူမျိုးစုက.. အခုပလာအူကျွန်းစုနေ ယက်ပ်လူမျိုးစုဗျ..။ သူတို့က ငွေဆိုပြီး.. ကျောက်သားထုကို အ၀ိုင်းပုံထု.. အပေါက်ဖောက်ပြီးသုံးတာ..လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀၀၀ မကကတည်းကတဲ့..။
ဥပမာ..။အိမ်ဝယ်မယ်ဆို.. အိမ်တလုံးအဲဒါတခုပေါ့..။ ရောင်းတဲ့သူဆီကို ..အဲဒီပိုက်ဆံကြီး ၀ိုင်းထမ်းပို့လိုက်ရော..။
နောက်ပိုင်း.. ကျွန်းစုအချင်းချင်း.. အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တာမှာလည်း.. လှေနဲ့သယ်ရင်း.. ပင်လယ်ထဲကျသွားတာတွေရှိတယ်..။
သူတို့အတွက် ပြဿနာမရှိ..။ ပင်လယ်ထဲကျနေတဲ့ အဲဒီကျောက်ဝိုင်းကြီးကိုညွှန်းပြီး ငါ့ဟာ.. သူ့ဟာနဲ့..အဖိုးဟာ..အဖေဟာဆိုပြီး ဆက်ရောင်းဝယ်တာပဲ..။
အဲဒီစနစ်ဟာ.. ဒီခေတ်.. ဘဏ်နဲ့ချက်လက်မှတ်တို့ရဲ့မိခင်စနစ်ပဲ..။
အဂ င်္ါဂြိုလ်မြေဂရမ်ကွက်နဲ့ ဘာလုပ်စားလို့ရတယ်ဆိုတာ..။ ကြယ်ကိုလက်ညိုးလှမ်းထိုးပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပေါ့…။
အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တည်ဆောက်လို့ရတယ်… လို့..။ နောင်ဘ၀မှာ.. သာဝတိံသာမှာ.. နတ်သားဖြစ်မယ်.. နတ်သမီး ၅၀၀စီရမယ်ထက်တော့ အများကြီးပိုသေချာတာပဲလေ..။
အဲဒီလို မသေမချာကြီးကိုပြောနေတဲ့.. ငရဲပြည်နတ်ပြည်ပွဲစားဘုန်းဘုန်းတို့ဆီ.. ငွေသန်းချီလှူတယ်ဆိုပြီး.. ပေးပစ်နေတာမဟုတ်လား..။
ကိုရင်တောင် အခုအသက်ထိ.. ပေးဖူးငွေ.. ဒေါ်လာ ၁၀၀ဖိုးမက ရှိလောက်တယ်.။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: သြော
လူဒွေ သင်္ကေတနဲ့ပိုက်ဆံအကြောင်းပြောချင်ရင်
လက်ညှိုးနဲ့လက်မ ၀ိုင်းပြတာ ဒကြောင့်ကိုး
မီးလဲမလောင် ရေလဲ မပျော် အလွယ်ခိုးလို့ လဲ မရ ခင်းပြီး အိပ်လို့ လဲရ ကာလို့ လဲရ ဂွတ်ထ
ဒီခေတ်ထိရှိနေရင် ငွေတိုး ဘယ်လိုပေးစားကြမလဲမသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
Thint Aye Yeik says: .ကြံကြီးစည်ရာတွေ
manawphyulay says: တဂျီးက ဘီယာဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ဘယ်နှဧကလောက် ၀ယ်ထားပြီးပြီလဲ?
Ma Ma says: တစ်ဧက ၉ဒေါ်လာဆိုတော့………….
ဂြိုလ်တစ်ခုလုံးတောင် မြန်မာပြည်တစ်ယောက်ဝယ်တာနဲ့တင် ကုန်လောက်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: သန်ဆင်ခိုင်နဲ့ နီးဖို့ အမျှော်မြင်ကြီးစွာနဲ့ အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ် မြေတဂွက် ဝယ်မည်။
မြစပဲရိုး says: လော့ဒ်ကြောင်ဂျီး ဖြစ်ချင်ရင် စကော့တလန်မှာ ဝယ် ပါလား ကြောင်ကြောင်။
မြစပဲရိုး says: ဒါများ အဆန်းလုပ်လို့။
စကော့တလန် မှာ ပေါင်၃၀ ပေးရင် မြေ ပေါက်စ တစ်ကွက်ရတယ်။ Lord or Lady နာမည်ခံလို့ ရသပေါ့။
kai says: ငွေစက္ကူတွေကို.. ရွှေအပေါင်ထားပြီး ထုတ်တာထက် ပိုခိုင်မာတဲ့နည်းပဲ..။
သေသေချာချာစဉ်းစားပြီး.. မြန်မာပြည်က မြေတွေကို.. အဲလိုလုပ်သင့်တယ်..။
ဘဏ်တွေမြန်မာပြည်ထဲရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့.. ဆွဲဆောင်မှုတခုဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်မှာ. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: တကယ်ပါ.. ခုချိန်မှာ အလိုချင်ဆုံးကို ပြောပါဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ ကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ကိုယ် နေချင်တာ.. လောလောဆယ် အိမ်ပိုင်မဟုတ်သေးတောင်.. ခဏခဏမပြောင်းရဘဲ ငှားနေလို့ရမယ့်အခြေအနေလေးပေါ့.. ကိုယ့်လစာရဲ့ တစ်ဝက်နီးပါးလောက်ကို အိမ်ငှားနေဖို့ မသုံးနိုင်သေးသလို… (၆) လတစ်ခါ ငွေအလုံးအရင်းကြီးပေး.. (၆) လပြည့်တော့ ထပ်မငှားတော့လို့ပြောင်း ဆိုတာကလည်း ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးကိုး… အိမ်တစ်အိမ်မှာ မိန်းကလေးရွယ်တူတွေချင်း (၇) ယောက်လောက် စုနေတာကျတော့လည်း အင်မတန်စကားပြောရတာမို့လား.. ဆိုတော့ မကြာခင် အိမ်ဈေးတွေကျလာပါစေလို့ပဲ… မျှော်လင့် မျှော်လင့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အမည်ပေါက်လား
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ကိုရောက်ဖို့ မနည်းသွားရဦးမှာ။ အင်္ဂါဂြိုလ်မှာတော့ မနေချင်ဘူး။